ဥရောပ Mobility Week ပွဲများကို Konya တွင်စတင်ခဲ့သည် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး42 Konyaဥရောပ Mobility ကိုအပတ်ပွဲများ Konya အတွက် Start
17 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ဥရောပ mobility ရက်သတ္တပတ်လှုပ်ရှားမှုများ Konya စတင်ခဲ့
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်များ၏နယ်ပယ်အများအပြားလှုပ်ရှားမှုများထွက်ယူသွားတတ်၏တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် Konya အတွက်ဥရောပ2တထောင်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းမြို့အပေါ်မှာလေထုညစ်ညမ်းမှုသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်မှတစ်စင်ကြယ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထားခဲ့ပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်၏ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းန်ကြီးဌာနသည်တူရကီ၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲပြည်ထောင်စုနှင့် Seljuk ယာဉ်အသွားအလာသင်တန်း Park မှာဆရာ, ဆရာမမှပထမဦးဆုံးပရိုဂရမ်တစ်ခုဆီသို့ဦးတည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏မြူနီစီပယ်တှငျကငျြးပခဲ့ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ရဲဝန်ထမ်းများ၏ Konya တဲ့ Metropolitan အခြေအနေတွင် "Air ကိုအရည်အသွေး" လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ခဲ့သည်။
Little ogreci အနားနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာဧည့်ခံခဲ့သည်
ထို့နောက်တဖန်မူလတန်းကျောင်း Seljuk ယာဉ်အသွားအလာပညာရေး Park မှာကျောင်းသားများ, လုံခြုံလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပညာပေးလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရေးပါမှုကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
နျြးမာရေးအတှကျ, သဘာဝ, အနာဂတ်လမ်းလျှောက် FOR အံ့သောငှါစည်းဝေး
စက်တင်ဘာလအကြား Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ugur အီဘရာဟင် Altai, မြို့ကြီးများနှင့်မြူနီစီပယ်နှစ်စဉ် 16-22 ယူ. ထောက်ခံမှုအားပေးဖို့ရေရှည်တည်တံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအမံဥရောပ Mobility ကိုအပတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကောက်ယူပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောဥရောပများစွာသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဒီနှစ် Konya အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များကျင်းပဟုပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altai အဘိဓါန်, "သဘာဝတရားလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့, ထိနျးသိမျးနှင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်ကျန်းမာလူနေမှုအာကာသပေးနိုင်ရန်အတွက်ငါသည်သင်ဤကွီးစှာသောအဖှဲ့အစညျး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ထက် သာ. တစ်ပြိုင်နက်ဥရောပ2တထောင်ကျင်းပသွားမှာပါ" ဟုသူကပြောသည်။
အစီအစဉ်များ၏နယ်ပယ်အတွင်း "Air ကိုအရည်အသွေးသင်တန်း" နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများလုံခြုံလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးဖြစ်ရပ်တွေနဲ့နေ့တိုင်း စတင်. မူလတန်းကျောင်းကကျောင်းသားတွေအတွက်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ahi အပတ်အင်္ဂါနေ့တွင်, လျှပ်စစ်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဘတ်စ်ကားထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်စက်တင်ဘာလ 17 စင်ကြယ်သောလေထုအရည်အသွေးကိုလမ်းလျှောက်ပြပါလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ထိုကျောင်းသားများအတွက်စက်တင်ဘာလ 18 သန့်ရှင်းသောလေထုစင်တာခရီးစဉ်, လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ, Siller ပျော်ပွဲစားနှင့်စွန်ဖြစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းကကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ကြာသပတေးနေ့, တူရကီကနေစက်တင်ဘာလ 19, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ဘီးစီးတဲ့အဖွဲ့ကိုဆိုင်ကယ် Konya မှလာမယ့်အတူထိုအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အရောင်သန့်ရှင်းသောလက်လှုပ်ရှားမှုရာသီဥတုမှထိုနေ့တွင်ပင်, protocol ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ '' သန့်ရှင်း Air ကို '' ရေးရာလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးဖြစ်ရပ်များအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်။ သောကြာနေ့တွင်တူရကီမှဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စက်တင်ဘာလ 20 နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးခရစ်ယာန် Berger, တက်ရောက်လာမြို့သမိုင်းဝင်သောနေရာများသို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံအဖြစ်အပျက်, တနင်္ဂနွေစက်တင်ဘာလ 21 အပေါ်နောက်ဆုံးနေ့အစီအစဉ်များကို '' ထိရောက်မှုကား-အခမဲ့နေ့ '' အတူတက်အဆုံးသတ်မည်စဉ်စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 22 '' သင့်ရဲ့စက်ဘီးနှင့်အတူလာကြ '' ။
အဆိုပါအစီအစဉ်၏နယ်ပယ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုများဒုတိယဝန်ကြီး Fatma Varank တက်ရောက်သူ Maulana ရင်ပြင် 19 စက်တင်ဘာလပတ်ဝန်းကျင်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။
ဘယ်ကဥရောပကော်မရှင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ၏စည်ပင်သာယာဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူကမ်ပိန်း "ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်" ဆိုင်ကယ်နှင့်လူသွားလူလမ်းကြောင်းတိုးတက်အောင်ထက်လူတွေရဲ့တစ်ဦးချင်းစီ tools တွေနဲ့အစားထိုးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်အတူသွားလာရန်မက်လုံးပေးဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်နေကြဖြစ်သောနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 16-22 စက်တင်ဘာလ, များစွာသောနိုင်ငံများတွင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Izmir Mobility ကိုအပတ်ပွဲများစတင် 16 / 09 / 2019 Izmir Metropolitan Municipality သည်ဥရောပ Mobility Week ကိုမြို့များစွာနှင့်အတူကျင်းပသည်။ ထိုရက်သတ္တပတ်အတွင်း el Let's Walk Together ၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သောလမ်းအချို့နှင့်လမ်းများသည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုအားပေးသောလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပိတ်ထားလိမ့်မည်…
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ် 2019 တစ်နှစ်တာတင်ပြအစည်းအဝေး 22 / 08 / 2019 သမ္မတ၏အမူအောက်ရှိဒေသဆိုင်ရာအစိုးရပေါ်လစီကော်မတီမြူနီစယ်၏တူရကီနှင့်တူရကီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်း (TBB) ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်မှဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သြဂုတ်လအပေါ်ကင်ပိန်း Launch အစည်းအဝေး 2019 21 တစ်နှစ်တာအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ဖြစ်ပါတယ် ...
Gaziantep အတွက်ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်လှုပ်ရှားမှုများ 17 / 09 / 2019 Gaziantep Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်ဥရောပ Mobility Week လှုပ်ရှားမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်လုံခြုံစိတ်ချရသောလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်ဂုဏ်ပြုကြမည်။ မြို့တော်ဝန် Fatma Şahin, Gaziantep အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Davut Gülနှင့်çokအများအပြား
တူရကီအတွက်ဥရောပ Mobility ကိုအပတ် OK ကိုအဘိတ် 17 / 09 / 2019 Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့တော်သည်နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလနှင့်စက်တင်ဘာလများအတွင်းကျင်းပသောဥရောပ Mobility Week ကိုသူမအနေဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ Ankara မဟာစီးတီး
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်မိုးသီးမင်ျဂ Konya အတွက်လွန် 24 / 09 / 2019 Konya တွင်ကျင်းပသောဥရောပ Mobility Week သည်ဥရောပမြို့တော်2နှင့်အတူကျင်းပခဲ့ပြီး Konya Metropolitan မြူနီစီပယ်အားကစားကွင်းဘေးတွင်ကျင်းပသည့်“ ကားမရှိသောနေ့အခမ်းအနား” နှင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Mehteran ဖျော်ဖြေပွဲမှစတင်သောလှုပ်ရှားမှုများသည်နံနက်အားကစားဖြစ်သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပတ်လှုပ်ရှားမှုများ xnumxnc Bitliste
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: ဥရောပမီးရထားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးညီလာခံ 2012 - ဘရပ်ဆဲလ်